Xog: Galmudug Ma Leedahay Maxkamad Sare Oo Sharci ah,? – Hornafrik Media Network
Maxkamad Sare oo Galmudug ah ayaa Maalmihii la soo dhaafay Waraaqo kala duwan ka soo baxayeen, kuwaasoo lagu shaacinayay Warbaahinta iyo Baraha Bulshadda.
Maantay ayeey soo saartay Maxkamadaasi Go’aankii ugu yaabka badnaa waxay sharciyaysay dhamaan Xil ka qaadistii Madaxda Galmudug, kuwaasoo ay hadba Xildhibaano meel ku shiray sheeganayeen inay Xil ka qaadis sameeyeen, haddaba HornAfrik waxay dabagal ku samaysay Maxkamadda Sare ee Galmudug inay jirto iyo in kale.
intaanan u galin Jiritaanka Maxkamadda Sare waxay Maanta ku tilmaantay inay sharci tahay Xil ka qaadis meel aan ahayn Xarunta Baarlamaanka ay ku yeesheen Xildhibaano Galmudug ah oo sheegay inay Kalsooniddii kala laabteen Madaxwaynaha Galmudug, iyo Gudoomiye Ku Xigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Galmudug. Waxay sidoo kale Maxkamadaasi Sharci ku tilmaantay Nin ay u aqoonsatay in Xilkii laga qaaday Shir uu Gudoominayay oo Baarlamaan in Natiijadii ka soo baxday ay iyana sharci tahay, taasoo ka dhigay Go’aanka mid iska hor imaanaya.
Isla Gudoomiyaha Maanta hadlay waxa uu Xildhibaanadda ka soo horjeeda Madaxwayne Xaaf u aqoonsaday inay yihiin Qaswadayaal burburinaya Maamulka Galmudug, isla markaana waxa uu soo saaray Warqad uu ugu yeerayo, haddana dhinaca kale waxa uu ku tilmaamayaa Go’aankoodii mid sharci ah, taasoo ayadana ah wax iska hor imaanaya.
Jiritaanka Maxkamad Sare oo Galmudug ah.
Maxkamadda Sare ee Galmudug ma ahan mid la horgeeyay Baarlamaanka Galmudug, Waxaana sameeyay Madaxwaynihii hore ee Galmudug, C/kariin Xuseen Guuleed xilli ay ka hor yimaadeen Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka, iyadoona waqtigaasi uu soo saaray Gudoomiyaha Maxkamadaasi Qoraalo uu ku ayidayo Mr Guuleed, balse ugu dambayntii Guuleed wuu baxay, isna wuxuu iska joogay Xamar isagoo aan haysan Sharciyad.
Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Galmudug markii la doortay Madaxwayne Xaaf waxay diideen Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug inuu dhaariyo, iyagoo sheegay inaysan aqoonsanayn Maxkamad Sare oo Galmudug leedahay, kadibna isagoo fadhiya Xarunta Baarlamaanka Galmudug ayaa la dhaariyay Madaxwayne Xaaf, taasoo ka dhigaysa Xilkiisa mid aan sharci ahayn.
Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Galmudug waxa uu soo duubay Muuqaal muujinaya inuu ku hadlay meel Jid ah oo aan ahayn Gudaha Magaaladda, iyadoo uu u taagan yahay Gaari, taasoo laftigeedu ka dhigaysa Hadalkiisa mid aan micno wayn ku fadhin, Waxaana ay ahayd inuu ku hadlo Xafiiskiisa, haddiiba ay jirto Maxkamad Sare oo leh Xarun ay ku shaqayso.
Weerar Xalay Ka Dhacay Boosaaso, Yaa Ka Dambeeyay Weerarkaasi,?